လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Jennifer Lopez – FemaleWear.net
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Jennifer Lopez
ကမ္ဘာ့တင်ပါးအလှဆုံး ဟောလိဝုဒ်အဆိုတော်၊ မင်းသမီး Jennifer Lopez ဟာဆိုရင် ဘာပဲဝတ်ဝတ် သူမရဲ့ တင်ပါးအလှပေါ်လွင်အောင် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ မကြာခင် ထွက်ရှိတော့မယ့် ‘Second Act’ ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ သူမဟာဆိုရင် ချစ်သူ Alex Rodriguez နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပန်းနုရောင် ဆွဲသား အင်္ကျီအပွနဲ့ ဘောင်းဘီအပွကို လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရပြီး နေကာမျက်မှန်၊ ရွှေရောင်နားကပ်နဲ့ အိတ်ကြီးကြီးကိုလည်း လွယ်ထားပါသေးတယ်။ Jennifer Lopez ဟာဆိုရင် သူမရဲ့ ဖက်ရှင်းအတိုင်း တင်ပါးအလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘောင်းဘီအပွကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ထားပြီး တင်ပါးအလှကို ပေါ်လွင်အောင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးဟာဆိုရင် သူမကို အသက်(၄၉)နှစ်ရှိနေပြီဆိုတာ မေ့သွားလောက်အောင်ကို နုပျိုစေပါတယ်။ တင်ပါးအလှကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘောင်းဘီအပွနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတာကတော့ ဆွယ်တာပန်ရောင်အင်္ကျီအပွလေးပါ။ ဒီပန်းရောင်ဆွယ်တာရဲ့ လက်နေရာမှာ အလှအနေနဲ့ ငှက်မွေးပွလေးတွေ တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ငှက်မွေးပွလေးတွေ ပါလိုက်တာက ရိုးရိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ ဆွယ်တာကို အမြင်ဆန်းသွားစေပြီး ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။
Jennifer Lopez က ပန်းရောင်ကို အခုမှ ဝတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက သူမရဲ့ ဒုတိယရုပ်ရှင် မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပန်းရောင်တောက်တောက် dress အရှည်တစ်ထည်ကိုလည်း ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပန်းရောင်တောက်တောက် dress အရှည်က သူမကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ ဖက်ရှင် ဘုရင်မတွေထဲက တယောက်ဆိုတာကို အခုချိန်ထိ ထိန်းထားနိုင်ပါသေးတယ်။
သူမရဲ့ Instagram မှာတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာဆိုရင်လည်း ပန်းရောင် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ တွေ့ရပါတယ်။ ဆံပင်ကို ခပ်မြင့်မြင့်စီးထားပြီး ကိုယ်ကြပ် dress လေးက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ သမီးလေးကို ဝတ်ပေးထားတဲ့ ပန်းရောင်ဂါဝန်လေးဟာဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ ဒုတိယရုပ်ရှင် မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ dress ပုံစံလေးအတိုင်း ဝတ်ဆင်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“The only thing stopping you is you…” #SecondAct premiere night!!! Movie in theaters December 21st ?????
Esta princesa me robó el corazón esta mañana en Despierta America ???????????????? This Lil princess stole my heart this morning on Despierta America #SecondAct #PrincessesWearPink ?????
A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 14, 2018 at 9:03am PST
ဒါကြောင့်မို့ လာမယ့် ၂၀၁၉ မှာဆိုရင် ပန်းရောင်ခေတ်စားမယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောနေကြပြီး ဒီလအတွင်းမှာပဲ Jennifer Lopez ကတော့ ပန်းရောင် dress တွေကိုပဲ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပန်းရောင်ကတော့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်နော်။
Tags: Celebrity, Jennifer Lopez, Pink Fashion
V – Day အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ရာ Underwear အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rihanna
စူပါမော်ဒယ်လ် Gigi Hadid ရဲ့ အေးစက်စပြုနေပြီဆိုတဲ့ အချစ်ရေး